Shina Modely No: China Manufacture Automatic Control YDJ Series Hydraulic Scrap Metal Shear Baler Machine orinasa sy mpamatsy | Miray Top
Modely No: Shinoa Manufacture Automatic Control YDJ Series Hydraulic Scrap Metal Shear Baler Machine
YDJ andian-dahatsoratra vy manety baler milina ny fitsipiky ny fiasan'ny:
1. Fizotry ny fanosehana: atombohy aloha ny maotera, ento ny paompy menaka hanodina ny famatsiana solika, ary alefaso any amin'ny toerana mety ny fitaovana. Tsindrio ny bokotra hety, tsindrio ny cylinder akora, ary ny cylinder mpanety dia mihetsika misesy mba hahatsapa ny fanerena sy ny fanetezana. Rehefa vita ny fanetezana dia miverina amin'ny toerana voalohany ny mpitatitra fitaovana sy ny milina fanontam-pirinty mba hijanonana, ary tapitra ny fanetezana voalohany.
2, fomba fiasa: noho ny fampiasana ny fivezivezena amin'ny lalana roa-dalana, ny fanetezana roa dia afaka mifandray ho azy, mivezivezy mandeha ho azy.
Hydraulic scrap metal shear baler machine dia manana tombony tsara ho an'ny indostrian'ny fanodinana metaly. Amin’izao fotoana izao, olana sedrain’ny firenena tsirairay ny tsy fahampian’ny loharanon-karena. Na inona na inona firenena an-dalam-pandrosoana na mandroso, ny fomba hanaovana ny fanodinana tsara indrindra dia lohahevitra mafana foana. Noho izany dia mamolavola ny karazana milina fanodinana vy hydraulika rehetra izahay ho an'ny mpanjifanay mba hiatrehana ny fako metaly mba hahafeno ny fepetra takian'ny mpanjifanay.
Hydraulic scrap vy manety baler milina, dia be mpampiasa amin'ny isan-karazany maivana sy manify fitaovana, famokarana sy ny fiainana fako vy, hazavana metaly rafitra faritra, karazana plastika tsy ferrous metaly (stainless vy, aluminium firaka, varahina, sns) fonosana famatrarana sy fanetezana; Na ny fako mivantana compressed fonosana.
Tsy toy ny balers metaly, ity milina fanodinana metaly hydraulika ity dia afaka manindry sy manety ny vy.
●Hydraulic drive, milamina sy tsy misy tabataba, haingana extrusion hafainganam-pandeha, hery extrusion lehibe, compact block, tsy mora ny miparitaka.
●Adopt takelaka vy fenitra sy ny teknolojia welding mandroso, ny mekanika faritra dia mateza, ambany tahan'ny tsy fahombiazana sy ny fanompoana ela velona.
●Azo apetraka ny rafitra fampangatsiahana mba hanatsarana ny fiasan'ny fitaovana sy hampihenana ny tahan'ny tsy fahombiazana. Ny rafitra fampangatsiahana dia azo zaraina amin'ny rano mangatsiaka sy ny rivotra.
●Ny tombo-kase cylinder dia mampiasa peratra GRAI nafarana, izay manana famehezana tsara sy fanoherana mahery vaika.
●Fametrahana mora, dian-tongotra kely, tsy misy fototra, fototra, sns. Fomba tsotra, azo esorina, mandeha ho azy.
●Cold extrusion dia tsy manova ny fitaovana metaly ary manatsara ny tahan'ny fampiasana.
● Coefficient dia ambony noho ny nentim-paharazana hammer fonosana, mekanika fonosana, sns.
●Ny fanaraha-maso automatique PLC dia mora ny miasa sy mitazona.
●Ny milina fanasan-damba vita amin'ny vy hydraulika dia afaka manampy anao hamonjy asa, hanatsara ny famerenana amin'ny laoniny, hampitombo ny vidin'ny varotra ary hanatsara ny tombony.
●Afaka manampy anao hamonjy ny toeram-piasana, dia mahasoa ny fitantanana ny toerana.
●Ny mpanjifa dia afaka mampifanaraka ny famaritana sy ny haben'ny fonosana araka ny filany manokana amin'ny fitaterana na fitahirizana.
●Afaka manampy anao hampihena ny saran'ny fitaterana izany, hanatsara ny fahombiazan'ny asanao
1. Fizotry ny fametahana: atombohy aloha ny maotera, ento ny paompy menaka hanodina ny famatsiana solika, ary alefaso any amin'ny toerana mety ny fitaovana. Tsindrio ny bokotra hety, tsindrio ny cylinder akora, ary ny cylinder mpanety dia mihetsika misesy mba hahatsapa ny fanerena sy ny fanetezana. Rehefa vita ny fanetezana dia miverina amin'ny toerana voalohany ny mpitatitra fitaovana sy ny milina fanontam-pirinty mba hijanonana, ary tapitra ny fanetezana voalohany.
2. fomba fiasa: noho ny fampiasana ny fivezivezena switch roa-lalana fetra, roa kapoka hety azo mifandray ho azy, mandeha ho azy mivezivezy.
MODELY Hery fanapahana max (Ton) Haben'ny boaty press (mm) Haben'ny bala (mm) Ny fanetezana matetika (fotoana/min) Hery (kw)
Ny milina hydraulic Scrap Metal Shear Baler dia manome ampahany amin'ny milina marika malaza, niara-niasa tamin'ny mpamatsy marika malaza eran-tany izahay, toa an'i SIEMENS, NOK OMRON, SCHNEIDER, CHINT, MITSUBISHI sy ny sisa nandritra ny 10 taona mahery.
Ny modely ambany indrindra YDJ Series Hydraulic Scrap Metal shear Baler Machine dia azo arovana tsara ao anaty fitoeran-javatra 40 HQ. Raha sambo amin'ny sambo dia handrakotra ny poncho sy Load deck izahay mba hiarovana ny YDJ Series Hydraulic Scrap Metal shear Baler Machine.
Jereo ny milina Baler Scrap Metal Scrap Metal ho an'ny fanodinana metaly miasa!
teo aloha: Model No: NY Series hydraulic hot spinning mihidy milina
Manaraka: Modely No: Fanaraha-maso ny Manufacture Sinoa Y82 Series Vertical Hydraulic tsy metaly Press Baler Machine
Scrap Metal Compactor, Aluminum Foil Baler Machine, Y81 Hydraulic Baler, Fitaovana Pop-Top Can Baler, Leaf Compactor sy Baler, Baler baoritra vita an-trano,